होम आइसोलेसनः चिकित्सकीय निगरानी नपुग्दा जोखिमपूर्ण – Newssarokar
न्यूज सरोकार । २ जेष्ठ २०७८, आईतवार १६:३२
गण्डकी प्रदेशमा मात्र कोरोनाका ७७ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । ती मध्ये होम आइसोलेसनमा हुनेको संख्या पनि करिब ७७ सय जति नै छ । संक्रमितको तुलनामा थोरै संख्यामा मात्र बिरामी अस्पतालमा छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका अधिकांश बिरामीको अवस्था जटिल रहेको चिकित्सकले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय हरेक दिनहुँजसो यहाँ १५ जनाको हाराहारीमा संक्रमितले ज्यान गुमाईरहेका छन् । चिकित्सकका अनुसार होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीले पनि ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै संक्रमित भएपछि पनि लामो समय होम आइसोलेसनमा बस्ने र अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल पुग्दा ज्यान जानेको संख्या बढिरहेको छ । होम आइसोलेसनमा बस्दा स्वास्थ्य बिग्रेको पत्तो नपाउने र अन्तिम अवस्थामा अस्पताल पुग्दा ज्यान जाने जोखिम बढेको चिकित्सक बताउँछन् ।
गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी)की मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट टुमाया घले भन्छिन्, ‘अहिले ज्यान गुमाउने अधिकांश बिरामी अन्तिम समयमा अस्पतालमा आएर हो । बेलैमा अस्पताल आउने हो भने बचाउन सकिन्थ्यो ।’ उनका अनुसार संक्रमण पुष्टि भएपछि अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्ने गरेका छन् । होम आइसोलेसनमा बस्दा उनीहरुलाई शारिरिक अप्ठेरोबारे पत्तो हुँदैन । अन्तिम अवस्थामा च्यापेपछि हतारहतार अस्पताल पुग्दा अवस्था नाजुक भईसकेको हुने उनले बताईन ।
‘घरमै पनि निको होला की भनेर रोगले च्याप्दा पनि अस्पताल नआउँदा अहिले धेरैको ज्यान गएको छ,’ घलेले भनिन, ‘अस्पताल आउँदा निकै नै ढिला भईसकेको हुन्छ । हामीले बचाउने प्रयास गर्दा पनि सक्दैनौ ।’ होम आइसोलेनसमा बस्दा स्वास्थ्यबारे जानकार नहुँदा यो अवस्था आएको उनले बताइन । त्यसो भए के होम आइसोलेसन जोखिमपूर्ण हो त ? घले भन्छिन, ‘चिकित्सकीय निगरानीमा बस्न सक्ने अवस्थामा होम आइसोलेसन सुरक्षित मानिन्छ । तर, हामीकहाँ होम आइसोलेसनमा चिकित्सकीय निगरानी निकै नै कम छ । गाउँगाउँमा बिरामी रहेको र उनीहरुको चिकित्सकसम्म पहुँच पुग्नै सकस रहेको उनले बताईन ।
‘होम आइसोलेसनमा बस्दा कतिपय संक्रमितले आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रेको समेत पत्तो पाउँदैनन, त्यसो हुँदा उनीहरुले चिकित्सकीय निगरानी पनि जरुरी ठान्दैनन,’ घलेले भनिन, ‘तर, जब निकै नै कमजोर बनाउँछ, त्यसपछि अस्पताल दौड्दा ज्यान जोगाउन कठिन भएको छ ।’ होम आइसोलेसन बस्ने बिरामीलाई निरन्तर रुपमा चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक पर्ने उनले बताईन ।
वरिष्ठ फिजिसियन डा. बुद्धिबहादुर थापा पनि होम आइसोलेसन सुरक्षित नभएको बताउँछन । ‘अहिलेको संकटको अवस्थामा मै हुँ भन्नेलाई त पहुँच छैन भने सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यकर्मीसम्म पहुँच नै पुग्दैन,’ थापा भन्छन, ‘होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक पर्छ । तर, यहाँ चिकित्सकसम्म उनीहरुको पहुँच नै पुग्दैन ।’ होम आइसोलेसनमा बस्नेले चिकित्सकको सम्पर्कमा रहँदा कुनै अप्ठेरो भए समाधान हुने भएपनि सबैको स्वास्थ्यकर्मीसम्म पहुँच नै नपुग्दा अहिले बढी मानवीय क्षति भएको उनले बताए ।
रोल्पामा पछिल्लो २४ घण्टामा ३८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यो संगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या ४ सय ३४ पुगेको छ । यसै गरी गत २४ घण्टामा एक जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । यो संगै जिल्लामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुगेको छ । जिल्ला प्रसाशन कार्यालय […]